Sony က AI အ-အခြေပြု Edge Analytics မှပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလတ်စားလေဆာစစ်ဆေးခြင်း Projector InfoComm "အကောင်းဆုံးပြရန်၏" ဂုဏ်ထူးချီးမြှင် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Sony က AI အ-အခြေပြု Edge Analytics မှပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလတ်စားလေဆာစစ်ဆေးခြင်း Projector InfoComm "အကောင်းဆုံးပြရန်၏" ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်
Sony က AI အ-အခြေပြု Edge Analytics မှပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလတ်စားလေဆာစစ်ဆေးခြင်း Projector InfoComm "အကောင်းဆုံးပြရန်၏" ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်
Sony က ၏ကြေညာသူထံမှထိပ်တန်းဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ခဲ့သည် AV စနစ်နည်းပညာ မဂ္ဂဇင်းနှင့် အသံနှင့်ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာ အောက်ပါမဂ္ဂဇင်း InfoComm 2019 ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Orlando တွင်ပြသပါ။ Sony က'' s ကို AI အ-based Edge Analytics မှပစ္စည်းကိရိယာ, အ REA-C1000 ကနေအိမ်ပြန်တဲ့ "အကောင်းဆုံးပြရန်၏" ဂုဏ်အသရေကိုယူ AV စနစ်နည်းပညာအဆိုပါ VPL-FHZ75 3LCD လေဆာပရိုဂျက်တာမှာ "Show ကိုအကောင်းဆုံး" ကိုလက်ခံရရှိစဉ်ကနေအနိုင်ရ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာ မဂ္ဂဇင်း။
AV စနစ်နည်းပညာ မဂ္ဂဇင်းများဝယ်ယူရန်နှင့် AV စနစ်နှင့် IT စနစ်များထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမန်နေဂျာများအတွက်ထုတ်ဝေဖြစ်ပါတယ်။ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာ ပေါင်းစည်း, ကန်ထရိုက်တာကုန်သည်တွေနှင့်အတိုင်ပင်ခံတစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
AI အ-based Edge Analytics မှပစ္စည်းကိရိယာ: Sony က'' s ကို REA-C1000 အသုံးပြုသူများကိုအထူးပြုသင်တန်း, အပိုဆောင်းန်ထမ်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲအမှန်တကယ်အချိန်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါး REA-C1000, ချိတ်ဆက်ကင်မရာများကနေလက်ခံရရှိသည့် input ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလိုအလျောက်အစစ်အမှန်အချိန်တခြားပုံရိပ်တွေကိုအတူကပေါင်းစပ်ဖို့အာရုံထဲမှာအရာဝတ္ထု extract ရန်၎င်း၏အဆင့်မြင့် AI အ-based ကိုဗီဒီယို analytics နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကထူးခြားတဲ့နည်းပညာမဆိုချိတ်ဆက်ကင်မရာနှင့် AV စနစ် setup ၏အစွမ်းထက်ဦးနှောက်ဖြစ်ဖို့ REA-C1000 ဖွင့်, ရွေ့လျားမှု / မကျြနှာကို detection နဲ့အရောင် / ပုံသဏ္ဍာန်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများကုန်ကျ-ထိရောက်စွာမှအကြောင်းအရာများထိတွေ့ဆက်ဆံ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖန်တီးခွင့်ပြုပါတယ်။
လေဆာစစ်ဆေးခြင်း Projector: အသစ် VPL-FHZ75 (6500lm) နှင့် VPL-FHZ70 (5500lm) ထိုသို့သောတက္ကသိုလ်များ, ကော်ပိုရေးရှင်း, အသင်းတော်များ, ပြတိုက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးတပ်ဆင်အဖြစ်အလတ်စား enviroments မှာမြင့်မားသောအရောင်အဝါစီမံကိနျးအတှကျတိုးမြှင့စျေးကွက်ဝယ်လိုအားမှဖြည့်တင်း။ ပူဇော်သက္ကာကို WUXGA Resolution, နှစ်ဦးစလုံးစစ်မှန်တဲ့လူမည်းများနှင့်တိကျမှန်ကန်-to-ဘဝကိုအရောင်မျိုးပွားများကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူတောက်ပနှင့်တက်ကြွပုံရိပ်တွေကယ်နှုတ်တော်မူတစ်ခုဆွဲသွင်းပါဝင် optical လျော်ကြေးနှင့်အတူအသစ်တီထွင် 0.76 လက်မအရွယ် LCD panel ကိုအသုံးပြုပါ။ နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များအလိုအလြောကျ projector ကို '' ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစွာသော '' အသိဉာဏ် setting ကို '' အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူလာ။
အဆိုပါ VPL-FHZ75 နှင့် VPL-GTZ240 4K SXRD လေဆာပရိုဂျက်တာမှာလည်းထံမှ Show ကိုဆုချီးမြှင့်တဲ့အကောင်းဆုံးအနိုင်ရ projector ဗဟို. projector ဗဟို ပရိုဂျက်တွေ, မျက်နှာပြင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်သတင်းအချက်အလက် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သားအပေါငျးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Sony က'' s ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာများ, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး pro.sony.
Cobalt Digital သည် Ciro Noronha အားအင်ဂျင်နီယာအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်မြှင့်တင်ပေးသည် - အောက်တိုဘာလ 15, 2019
အမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီ Variant Systems Group သည် FOR-A Company Limited မှမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် - အောက်တိုဘာလ 10, 2019
Sony မှ UWP-D ၏လူကြိုက်များသောကြိုးမဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းစီးရီး NFC SYNC ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် - အောက်တိုဘာလ 9, 2019
AI အစွန်း analytics InfoComm လေဆာပရိုဂျက် SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony က Sony က projector ကို TVU ကွန်ယက် virtual reality	2019-06-21
ယခင်: VFX ကို Legion of Honour '' နေ MA, 'တစ်ဦးကထိတ်လန့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် Visual Effects တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
နောက်တစ်ခု: Video Editor